Ivenkile yeeMveliso zoMbane iFikelela kwiinyanga ezine zeKhowudi eziSimahla zeApple Music | Ndisuka mac
Kungenzeka ukuba ngaphezulu kwesinye sazo sele sitshintshile kwithuba elidlulileyo kodwa ukubonisa ukuba ayihlali njengoko besitsho apha. Kule meko i-elektroniki eyaziwayo kunye nezixhobo zokugcina iMediaMarkt ibonelela ngekhowudi yenyuselo yeApple Music apho Abasebenzisi abatsha banokufikelela kwiinyanga ezine zenkonzo yasimahla.
Awudingi ukuba uthenge nantoni na evenkileni, kungaphantsi kangakanani na Ukunyuselwa okusebenzayo okwexeshana Kwaye emva kweenyanga ezininzi abanye abasebenzisi basixelele ukuba iyafumaneka kwakhona, ke sifuna ukuyabelana nawe ukuze uyonwabele.
Kule nto kulula njenge fikelela kukhuthazo olu nxibelelwano kwaye wonwabele iinyanga zasimahla zenkonzo. Mhlawumbi ukuba sele uyisebenzisile le khowudi iya kukuxelela ukuba akunakwenzeka ukuba uyikhulule kabini okanye isenokungasebenzi kuwe kodwa ukuzama. Kwiimeko ezininzi thina Uya kongeza inyanga yasimahla kwiApple Music.
Ukuba sele unonyuselo okanye usebenzise enye ikhowudi ekuqaleni kwale nyanga, iya kongezwa ngokuthe ngqo kwixesha osele unalo, ngenxa yoko iyongezeleka. Khumbula ukuba le nkonzo ye-Apple Music inexabiso lenyanga le-9,99 euro kwaye uya kuba nakho ukufikelela kuwo wonke umculo wakho okanye umculo owuthandayo kwizixhobo zakho nanini na naphina apho ufuna khona. I-Apple Music sele ikhona ngoku ngaphezulu kweengoma ezingama-70 ezigidi akukho ntengiso ukuze wonwabe kowona mculo mhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ivenkile ye-elektroniki inikezela kwiikhowudi zasimahla zeenyanga ezine kwiApple Music